Cumar Finish:”Aqalka Sare ee hadda jira waxa uu ku dhisan yahay si sharci darro ah” – Radio Daljir
Cumar Finish:”Aqalka Sare ee hadda jira waxa uu ku dhisan yahay si sharci darro ah”
Abriil 8, 2021 10:52 b 0
Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed “Filish” ayaa ku tilmaamay Xildhibaannada Aqalka sare kuwo ku dhisan sharci darro.
“Waxaay aheyd in wixii la dhisaayo oo awood qeybsi ah in 4.5 lagu qeybsado ama tirada Gobolada lagu qeybsado intaba lama sameyn, beel waxay qaadatay 8 midna 17, taas ayaa horta jirta marka beeshii 17 heysatay waxay rabtaa in ay difaacato oo aan laga qaadin waana cadaalad darro ayuu yiri” Cumar Filish.
Duqa Muqdisho oo ka hadlayay sababaha keenay in heshiis laga gaari waayo qabashada doorashooyika ayuu eeda dusha uga saaray maamulada Jubbaland iyo Puntland.
Doorashada inay qabsoonto oo si xalaal ku qabsoonto waxaa looga fadhiyaa dowladda Federaalka, dowladda waa qabaneynaa diyaar u nahay taagan tahay, kuwa kale waxay taagan yihiin maba la qabanaayo, illaa qodobkan aniga la ii fuliyo, waa in danteyda aan hela, haddii kale maba la qabanaayo”
Duqa Muqdisho ayaa waxa uu ka mid ahaa madaxdkii ka qeybgalaysay shirka loogaga hadlayay arrimaha doorashooyinka kaasoo aan wax heshiis ah laga gaarin.
Cumar Cabdirashiid: “Waxaan ka digaynaa muddo kororsi & xasilooni darro